शाक्यद्वारा इजरायली राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश, इजरायली राष्ट्रपति नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक « Kathmandu Television HD
शाक्यद्वारा इजरायली राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश, इजरायली राष्ट्रपति नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक
इजरायल । इजरायलका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा.अन्जना शाक्यले इजरायली राष्ट्रपति रेउभेन रिभ्लिन समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी हुन्।
ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न आयोजित समारोहमा इजरायली राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाली नवनियुक्त राजदूत शाक्यलाई विशिष्ट सम्मान दिएको थियो। कार्यक्रममा राजदूत डा. शाक्यलाई विशिष्ट सम्मान ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको थियो ।
समारोहमा राजदूत डा. शाक्य र इजरायली राष्ट्रपति रेउभेन रिभ्लिनबीच आधा घण्टा भेटवार्ता समेत भएको थियो। भेटका क्रममा डाक्टर शाक्यले राष्ट्रपति रिभ्लिन समक्ष नेपालका सात वटै प्रदेशमा इजरायलको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी अर्थात इजरायली प्रविधिको तालिम केन्द्र खोल्नका लागि प्रस्ताव गरिन्।
राजदूत डा।शाक्यले इजरायली उच्च प्रविधिको कृषि, सूचना–प्रविधि, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, मेडिकल, शिक्षा तथा एडभान्स टेक्नोलोजीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी स्थापना गरि नेपाललाई सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई राष्ट्रपति रिभ्लिनले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । उनले नेपाललाई सहयोग गर्न आफु तयार रहेको समेत बताएका थिए ।
भेटवार्ताकै क्रममा राजदूत डा. शाक्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको शुभेच्छा सन्देश र नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि राष्ट्रपति रिभ्लिन समक्ष पेश गरेकी थिइन। दुई पक्षीय भ्रमणबाट नेपाल र इजरायल बीचको दौत्य सम्बन्ध अझ बलियो हुने उनको भनाई थिायो।
राजदूत शाक्यले नेपालमा हुन गइरहेका लगानी सम्मेलनमा लिएर नेपालमा लगानी गर्न इजरायली उद्योगपति तथा व्यापारीहरुलाई आह्वान गरिन्। आह्वानसँगै त्यहाँका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा व्यापारीहरु सकारात्मक बनेका छन्। उनीहरुले नेपालमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनमा भाग लिएर नेपालमा लगानी गर्न इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन्।
राजदूत डा. शाक्यले इजरायलको राष्ट्रभाषा हिब्रुमा समेत सम्बोधन गर्दा इजरायली राष्ट्रपति रिभ्लिनदेखि सरकारी कर्मचारी र इजरायली मिडियाहरुले प्रशंसा गरेका थिए । इजरायली मिडियाले राजदूत डा. शाक्यको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको छन् ।